Tag: bhizinesi | Martech Zone
Zvinetso zvebhizinesi & Mikana Ine Iyo COVID-19 Denda
Chipiri, Gunyana 6, 2020 Chipiri, Gunyana 6, 2020 Douglas Karr
Kwemakore akati wandei, ini ndaratidza kuti shanduko ndiyo chete inogara ichitengeswa nevashambadzi. Shanduko muhunyanzvi, masvikiro, uye mamwe magero maseru ese akamanikidzwa masangano kuti agadzirise kune zvinodiwa nevatengi nemabhizinesi. Mumakore achangopfuura, makambani aive achimanikidzwa kuve pachena uye nevanhu mukuedza kwavo. Vatengi nemabhizinesi vakatanga kuita mabhizinesi kuti aenderane nekutenda kwavo uye tsika dzakanaka. Iko masangano aimbopatsanura hwaro hwavo
Zvemagariro Midhi Rondedzero: Matanho eImwe neSocial Media Chiteshi cheMabhizinesi
China, Kurume 23, 2017 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Mamwe mabhizinesi anongoda yakanaka yekutarisa kuti vashande kubva kana vachiita yavo yemagariro nhepfenyuro zano ... saka heino rakakura rakagadziriswa neboka rese rehuropi. Iyo yakanaka, yakaenzana nzira yekutsikisa uye kutora chikamu munzanga midhiya kubatsira kuvaka vateereri vako uye nharaunda. Zvemagariro midhiya mapuratifomu ari kugara achivandudza, saka ivo vakagadzirisa yavo yekutarisa kuratidza ese azvino uye akakosha maficha eanonyanya kufarirwa enhau enhau chiteshi. Uye isu tave
Hapana Hype Nhungamiro kune Zvemukati Zvekugadzira
Chitatu, December 10, 2014 Chitatu, December 10, 2014 Douglas Karr
Ivo vanhu veSpundge vakanyora blog blog, 9 Matanho Ekugadzira Inobata Zvemukati, iine "isina-hype, buzzword yemahara" infographic yandinoda chaizvo. Kugadzira zvemukati zvemukati ndiro dombo repakona reiyo yakasimba yezvinyorwa zano, uye kukubatsira iwe kugona hunyanzvi ichi chikamu cheSpundge's mission. Nzira huru yekugadzira zvirimo ndeye kudzokorodza zvinyorwa, infographics uye zvimwe zvinhu muzvinhu zvinokwezva uye zvinomanikidza. Izvi zvakare zvinokupa iwe mukana wekuchengeta
NeChishanu, Nyamavhuvhu 29, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chirevo chazvino kubva kuThunderhead.com chinotsanangudza kubatana kwevatengi muzera rekushandurwa kwedhijitari: Engagement 3.0: Iyo Nyowani Modhi yeKutenga Kwevatengi inopa ruzivo kune iyo yese yevatengi ruzivo mufananidzo. Heano zvimwe zvakakosha zvakawanikwa: 83% yevatengi vanonzwa vane chokwadi nezve bhizinesi rinoshandisa zvakanaka ruzivo uye dhata ravanobata kune vatengi vavo, semuenzaniso nekuratidzira ruzivo rwezvigadzirwa nemasevhisi pamwe nezvinopihwa izvo zvinobatsira.